Ministry of Planning Finance and Industry | COVID-19 Myanmar
COVID-19 သက်ရောက်မှုကြောင့် ထိခိုက်မှုရှိနေသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား COVID-19 Fund မှ ထုတ်ပေးမည့် ချေးငွေလျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း အသိပေး ကြေညာခြင်း
၁။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ ၁၈ ရက်နေ့တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွား ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန နေပြည်တော်၌ကျင်းပခဲ့သည့် Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် စီးပွားရေးသက်ရောက်မှုများအပေါ် ကုစားရေး ကော်မတီ၏ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၂/၂၀၂၀) ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် စီးပွားရေးသက်ရောက်မှုများ အပေါ် ကုစားနိုင်ရန်အတွက် စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ အောက်ပါတို့ကို ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည် -
Subscribe to Ministry of Planning Finance and Industry
Copyright © 2021. Information Committee. All rights reserved.